Tapaho Ny Fahanginana: Fanentanana Hamotsorana ireo Mpikatroky Ny Zon’Olombelona Any Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2014 9:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, عربي, Français, English
Tsaroantsika androany i Alaa Abd El Fattah sy Bassel Khartabil (antsoina hoe Bassel Safadi), namana roa any am-ponja tsy amin'ny antony izay manohintohina ny hoavin'izy ireo amin'ny maha-mpihevitra zava-baovao sy malalaka azy ireo ao amin'ny tontolo Arabo. Nogadraina nanomboka volana Martsa 2011 tao Syria i Bassel, ary nogadraina imbetsaka tao Ejypta hatramin'ny fitondran'i Mubarak kosa i Alaa.
Soniavo ity fanambarana ity: Tsindrio eto raha hitondra ny fanohananao!
Tohano ao amin'ny Twitter sy Facebook amin'ny alalan'ny #FreeAlaa sy #FreeBassel i Alaa sy Bassel
Teraka sy lehibe tao Syria i Bassel, ary nanjary manam-pahaizana manokana momba ny fampivelarana rindrambaiko misokatra. Niara-namorona ny orinasam-pikarohana ifarimbonana Aiki Labs izy, ary tale teknika ao amin'ny Al-Aous, foibem-pikarohana sy famoahana manokana momba ny siansa arkeôlôjika sy ny zavakanto ao Syria. Mpitantana ny tetikasa sy tompon'andraikitra ao amin'ny Creative Commons[fr] ao Syria izy, ary nandray anjara tamin'ny Mozilla Firefox[fr], Wikipedia[fr], Openclipart[fr], sy Fabricatorz ihany koa. Anisan'ireo asa farany nataony ny fanavaozana indray ny sary 3D [refy telo] ny tanàna fahiny Palmyre[fr] ao Syria.
Tamin'ny volana Novambra 2012, nosaloran'ny Foreign Policy ho iray amin'ireo 100 mpihevitra mendrika indrindra manerantany i Bassel. Manam-pahaizana momba ny teknolojia informatika izay te hanampy hampandroso ny fireneny amin'ny alalan'ny fampidirana teknolojian'ny aterineto vaovao any amin'ny oniversite, orinasa sy ny vondrona firaisamonim-pirenena i Bassel. Manamarika ny andro faha-1000 nigadran'i Bassell androany, Andron'ny Zon'Olombelona.
Ejypsiana mpikatroka politika, bilaogera ary mpiaro ny rindrambaiko misokatra i Alaa Abd El Fattah izay nandany ny ankamaroan'ny androny tany am-ponja tao anatin'izay telo taona lasa izay. Nogadraina voalohany tamin'ny taona 2006 tamin'ny fitondran'i Mubarak, nogadraina imbetsaka i Alaa tamin'ny taona 2011 noho ireo fiampangana tsy misy mifandraika amin'ny fikatrohany ela be sy mahasarika. Tamin'ny Desambra 2011, tsy nahita ny fahaterahan'ny zanany lahy Khaled izy raha mbola tany am-ponja.
Tamin'ny volana Jiona 2014, nahazo sazy an-tranomaizina 15 taona tsy nisy fijoroana teo amin'ny fitsarana izy—na dia tao ivelan'ny tokontanim-pitsarana aza tamin'izany fotoana izany.
Na dia navotsotra tao anatin'ny fotoana fohy noho ny fandoavana onitra aza izy tamin'ny volana Septambra, nosamborina indray i Alaa tamin'ny 21 Oktobra. Nankalaza ny faha-33 taonany indray tao am-ponjan'i Torah ao Kairo izy tamin'ny 18 Novambra. Manan-jo hivoaka ny fonjany adiny iray isan'andro izy saingy matetika tsy mahazo mivoaka any an-tokontany. Tamin'ny 10 Desambra, nanomboka ny fitokonany tsy hihinan-kanina nandritra ny 38 izy.